၁ လအတွက် MTPL ရနိုင်မလား။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပါသို့မဟုတ်နိမ့်ဆုံးကာလအကူးအပြောင်းအာမခံအတွက်ရက်ပေါင်း ၂၀ အထိ (ကုန်ကျငွေသည်နှစ်စဉ်မူဝါဒ၏ကုန်ကျစရိတ်၏ ၂၀% ဖြစ်သည်) ။ သာ ...
OSAGO ကိုလယ်ထွန်စက်များနှင့်အခြားစိုက်ပျိုးရေးစက်ကိရိယာများတွင်လုပ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ မသင်မနေရဟုတ်မသင်မနေရအာမခံကိုဥပဒေအရသတ်မှတ်သည်။ OSAGO မပါရှိလျှင်သူတို့သည်ရဲရဲနှင့်မှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ၃ လအာမခံထားပါ
OSAGO အောက်ပျက်စီးမှုရှိပါကအာမခံကုမ္ပဏီသို့စာရွက်စာတမ်းများတင်သွင်းရန်နောက်ဆုံးရက်မှာအဘယ်နည်း။ စာချုပ်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသလောက်ဖတ်ပါ။ မှတ်မိသလောက် ၅ ရက်ရှိပါပြီ - မတော်တဆမှုဖြစ်ပွါးသည့်အချိန်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ...
OSAGO အတွက်ငွေပြန်ပေးလို့ရမလား။ မင်းပိုက်ဆံပြန်မပေးချင်တော့ဘူး ... သူတို့ခေါင်းကမြောနေတယ် !! ! ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၏နေ့မှစ။ ပြန်လာရမည်ဖြစ်သည်။ အကူအညီအကောင့်လုံလောက်ပါတယ် ပြီးတော့ငါ့ကိစ္စမှာသူတို့ကငါ့ကို Rosgostrakh ကဒ်ထုတ်ပေးတယ်။
ယခင်က Tver မြို့၏အမည်မှာအဘယ်နည်း။ Kalinin, ငါအဲဒီမှာ 1 KALININ သို့သွားပေမယ့်ဒီ Tver ဘို့ Tver ခဲ့ ... Tver (၁၉၃၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် Kali # 19311990; nin) သည်ရုရှားရှိမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီး ...
အွန်လိုင်း OSAGO ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။ ငါ Rosgosstrakh ကိုသွားခဲ့တယ်၊ အမြဲတမ်းအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​RESO မှာလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး Xs CO ဓာတ်ငွေ့လည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး Tinkoff အာမခံသည်မည်သူမျှမတတ်နိုင်စေရန်လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
မော်စကိုတွင်လေဆိပ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ ပြီးတော့သူတို့ဘာကိုခေါ်တာလဲ 4- Vnukovo, Bykovo, Sheremetyevo, Domodedovo ။ Zhukovsky အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၂၀ ရက်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်ဘက် ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သော Monino, Kubinka, Zhukovsky ။ AND ...
အာမခံမပါပဲကားမှတ်ပုံတင်လို့ရပါသလား။ ထိုအခါရဲဒီအောက်ခြေသို့ရောက်ရကြမည်မဟုတ်လော ရောဂါရှာဖွေရေးကဒ်များရောင်းချခြင်း (နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်း) နည်းပညာစစ်ဆေးခြင်းအွန်လိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ရုရှားနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်နှစ်နှစ်ကျော်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ...
ကားပိုင်ရှင်မရှိပဲအာမခံထုတ်ပေးလို့ရမလား။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအာမခံကိုသင်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။ ကားပိုင်ရှင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုရှေ့နေများ၏အခြေခံမှသာဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ပြဿနာမရှိပါဘူး။ အဲဒါထဲကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်
AAA နံပါတ်များသည်မည်သည့်အခွင့်ထူးများပေးသနည်း။ ဘယ်လောက်လဲ အလေးအနက်ထား .... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
AAA နံပါတ်များသည်မည်သည့်အခွင့်ထူးများပေးသနည်း။ ဘယ်လောက်လဲ လေးနက်စွာ ကျေးဇူးပြု၍ .... Vyborg တွင်မြစ်၏ ၂၀-၃၀ ခန့်ကိုဘယ်မှာရှိမည်ဆိုသည့်အပေါ် မူတည်၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်ငါ A *** AA ကိုယူဖို့မပြောဘူး၊ အနီရောင်ယူတာကပိုကောင်းတယ် ...
ကားတစ်စီးအတွက်အထွေထွေရှေ့နေချုပ်ကဘာလဲ။ လူတစ်ယောက်ကဒီကားကိုဘယ်လိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိလဲ။ အာမခံတွင်ပါ ၀ င်ရန်မလိုအပ်ပါ။ အယူအဆတစ်ခုအနေဖြင့်၊
မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည် တစ် ဦး အပြန်အလှန်ချိုးဖောက်မှုအသိအမှတ်ပြုတရားရုံးရှိခဲ့သည်။ ပျက်စီးမှုကိုဘယ်သူပေးမှာလဲ။ ယာဉ်တိုက်မှုတွင်ယာဉ်မောင်းများအပြန်အလှန်အမှားများရှိပါကယာဉ်ပျက်စီးမှု၏ ၅၀% ကိုငွေကြေးလျော်ကြေးပေးရမည်။ … ...
တိုးချဲ့ OSAGO - ဒီကဘာလဲ?
တိုးချဲ့ OSAGO - ဒီကဘာလဲ မတော်တဆမှုသည်သင်၏အမှားဖြစ်ပြီး 120t ၏ငွေပေးချေမှုကန့်သတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်ပါက။ R. ထို့နောက်ခြားနားချက်ကိုအိတ်ဆောင်ထဲမှမဟုတ်ပါ ဒါပေမယ့် extension ကိုမှ။ ငါအကြံပေးကောင်းတယ် ...
Ingosstrakh သည်မတော်တဆမော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီ၏တာဝန်ဝတ္တရားအာမခံအတွက်ငွေပေးချေမှုကိုလျှော့တွက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ပိုက်ဆံရရှိရန်အတော်အတန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်တရားစီရင်ရေးဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးအားလုံးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းသည်အလွန်ကျေးဇူးတင်စရာဖြစ်သည်။ ငါမှာဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိခဲ့တယ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲပြောချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
MTPL အာမခံတွင်ပါ ၀ င်ရန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြင့်လက်ရေးစာဖြင့်ပေးသောရှေ့နေနမူနာကိုအာမခံပေးပါ။ သင်သည်အာမခံထဲသို့ ၀ င်ရန်ရှေ့နေအင်အားမလိုအပ်ပါ။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုရိုက်ထည့်ပါလိမ့်မယ် Yandex ကိုသွားပြီး `ရိုးရှင်းတဲ့လက်ရေးစာတစ်နမူနာကိုရေးပါ။
ယာဉ်မတော်တဆမှုတစ်ခုစီတွင်ကားမရှိသောအာမခံမရှိပါကလမ်းလျှောက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်ပိုကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောပါသည်။ ) သင်ကားမောင်းသူသည်ဖျားနာနေသောလူဖြစ်သည်။ တီဗီမက်ထရိုမင်းသမီးမိန်းကလေးတွေနဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးနိုင်မယ့် kntgut doze ...
DGO မူဝါဒဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ DGO သည်နိုင်ငံသားတာ ၀ န်ယူမှုအာမခံအတွက်တာ ၀ န်ယူမှုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်သင်၏အမှားအားဖြင့်ထောင်ပေါင်း ၁၄၀ မှချဲ့ထွင်လိုလျှင် ...
မတော်တဆမှုတစ်ခုပြီးနောက်လွတ်လပ်သောစာမေးပွဲကိုမည်သူပြုလုပ်ခဲ့သနည်း။ လက်ရှိတွင်ဤပြ,နာမရှိပါ။ တရားရုံးများသည်သားကောင်များ၏ဘက်တွင်ရှိနေပြီးအာမခံပေးမှုမခံရခြင်း၊
လူတစ် ဦး ၏အာမခံထားရန်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။ အတွေ့အကြုံပေါ်သာမကမြင်းကောင်ရေစွမ်းအားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယာဉ်မောင်းသည်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသူ၏မြှောက်ဖော်ကိန်းများရှိပါကနေထိုင်ခွင့်ကိုမယူသင့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ကားတစ်စီးရောင်းလျှင်၊ ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရေးပါ၊ သင်ရောင်းသူဖြစ်ပါက TCP တွင်လက်မှတ်ထိုးပါ။ ၁။ ယာဉ်ရောင်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်အားမိတ္တူ (၃) ခုဖြင့်လက်မှတ်ထိုးပါ။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,776 စက္ကန့်ကျော် Generate ။